Khabiirka Cimiladu wuxuu muujinayaa 13 Tijaabooyin sahlan Isku-darka Ganacsi kasta oo Horumar leh
Guud ahaan dadku waxay u egtahay guushabac ah oo ciid ah, laakiin dhowr, waa wax caadi ah. Sidee suurtogal u tahay?
Marxaladda ugu horreysa waa in la dilo cabsida, taas oo ka timid dareenka kufsiga, adoo waydiinayasi joogto ah iyo qorsheyn haboon. Maamulaha Guud ee Macaamilka ee Macaamiisha Sare ,Igor Gamanenko ayaa sheeganaya in sannadaha waayo-aragnimadu ay yihiin kuwo qiimo leh sida ay qabaanka qaybqaatay fulinta mashruucyo badan. Halkan waxaa ku qoran talooyinka tobanlaha ah ee ku saabsan waxainay sameeyaan si ay u guuleystaan ​​ganacsiga, in khabiirku uu saameyn ku yeesho khibraddawaxqabadka waxsoosaarka ee Semt.
Waa inaad haysataa sawir weyn oo ah waxa aad doonayso inaad ka guulaysato fikraddamarxaladda ugu dambeysiga fulinta iyo kormeerka. Isla mar ahaantaa, waawaxaa muhiim ah in la fahmo tirada dadka aad rabto in ay ku lug yeeshaan,tiknoolajiyada aad qorshaynayso inaad shaqaaleysiiso, gaariga kuu ogolaanaya inaad labada dhinacba gudbisodadka iyo tiknoolajiyada. Qeexaan macaamiisha bartilmaameedka, hay'adda sharciyeyntaiyo qiimaha sicirka ee saadaalin doona faa'iido ama ugu yaraan sii joogi karoqorshaha wakhti yar ilaa intaad jebin karto xitaa iyo wixii ka dambeeya.
Ka dib markaad ku samayso fikrad maskaxeed, qorshe faahfaahsan oo dhanFikradaha kala duwan ee fikirkaaga waa la sameeyaa. Laga soo bilaabo ugu muhiimsanugu yaraan, waxtarka kharashka oo idil waa in si siman loo sifeeyo.Nuxurka geeddi-socodka arrintani waa mid lagu qiyaaso waxa ka fiicanWaqtigaas wuxuu kuu qaadan doonaa inaad ku guulaysato hadafkaaga oo si qaldan ujoogamuujinayaan inta lagu jiro fikrinta
Dabcan, waa in lagugu baraarugaa nooc gaar ahMacluumaad, laakiin taasi kuma filna inaad xaqiijiso guushaada.Sidaa darteed, baahida loo qabo cilmi baaris qotodheer ah lama huraan sida qaarxaqiiqooyinka lagama yaabo in ay adiga kuu furfuraan marka laga bilaabo aasaasiga ama waxyaabaha ay leeyihiinway kala duwan yihiin, oo waxaad u baahan tahay inaad ogaato..Mar labaad, iyada oo ku xiranMacluumaadka aad u baahan tahay, macluumaadka xogta waa in ay ahaatosi habboon loo sameeyo. Dhamaadka, macluumaadka saxda ah waaaad u muhiim ah sidaa daraadeed, ma haynin kheyraadka ku socda waddada khaldan
Samee daraasad ku saabsan macluumaadka aad heshay, ansaxinxaqiiqda oo la jaanqaado ujeedada la fahmi karowaxaan hore u sheegnay. Inta lagu jiro xaqiiqda, joogteynta waaaad u muhiim ah sida ugu dhakhsaha badan si aad u badan waxay keenaysaakalsoonida macluumaadka la uruuriyay
Markaad la kulanto dhammaan macluumaadka,waxay qaadan doontaa wakhti si ay u eegto hareeraha una aragto haddiiweli wali waxaa jira habab xoogan oo awood lehwaxay gaaraan natiijooyin isku mid ah ama ka wanaagsan. Maxaad samaynaysaatixgelin Waxaad tixgelisaa macaamiisha bartilmaameedka amamacaamiisha marka hore, maaha kharashka, waqtiga ama khayraadka.Kadib markaad sharaxdo waxa ugu muhiimsanmarkaad ku qanacsan tahay macaamilka, markaa waa inaad tixgelisaakharashka, waqtiga iyo khayraadka iyodooro fursadaha ugu fiican ee qorshahaaga
Sawir Qorshe kama dambeys ah
Iyadoo la falanqeynayo bedelaadaha la heli karo,hadda waxaad awood u lee-dahay in aad u istaagtid istaraatiijiyadasi loo shaqaaleeyo, taas oo mudnaan siin doonta daneeyayaasha 'danaha. Mid ka mid ah dhammaan waxyaalahaadu waa inay istaagaanku saabsan ku qanacsanaanta macaamilka iyo waqtiga. Ha sameyninaad ilowdo inaad xor u tahay inaad shaqaaleysiiso dhowrxeeladaha wakhtiyo kala duwan ku xiran tahayduruufaha jira. Waxa ugu muhiimsanWaxyaabaha lagu gaari karo waa hubaal joogta ah.
Ikhtiyaarka Kale ee Sanduuqa
Kiiskaaga ganacsiga badanaa waa qalabhelitaanka miisaaniyada loo baahan yahay. Waa ficil cad oo ah fikradda ah ujeeddada iyo hindisahaSababta loo istcimaalo istaraatijiyad gaar ah oo ka dhan ah caqabad kasta. Waa inay noqotaa waqtigaaiyo si fudud, fudud oo cad oo shaki ah iyo, nooc kasta oo aan caddayn. Aad bay muhiim u tahay,waa inaad isticmaashaa ilaha aan saameyn ku yeelan doonin ganacsigaaga, tusaale ahaan,dulsaarka deynka badan, waajibaadyada sharciga ah oo muddo dheer oo adag, xaalado adag oo adaggeerida Had iyo goor wax ku dheeh kharashka qiimaha caasimadda ee xisaabtami doona dhammaan hababkakhataraha oo weli ku dhacaya xadka xadka dakhligaaga la filayo.
Dib u cusbooneysii Qorshahaaga
Weligeed ma ahan waqti aad u badan iyo ilahaagasi loo yareeyo dhacdooyinka keeni kara khasaaraha. Sidaas, qaado waqti aadna dib u eegto dhammaan wixii aad samaysaymaalmaha ugu dambeeya, toddobaadyada iyo xataa bilo. Ha u ogolaanin inay sanqadhaan sanado laakiin haddii ay sidaas sameeyaan, sameehubso inaadan iska daynin ama ku siinin dib u goynta..Waxaa laga yaabaa, inay jiri karto qaar ka mid ahgooyo in la sameeyo. Markaad ogaato, wakhti wakhti lumin, samee baahidaada oo la kulanto tallaabada xigta.
Waa waqtigii lagu soo rogi lahaa oo lagu ciyaari lahaawax yar maahan, sababtoo ah ma ogid waxa ku sugnaa. Inkastoo "qorshaynta" qorshe kuu kaydineysaa laba jeerWaqti badan inta lagu jiro hirgelinta "waa run, laakiin marnaba ma dhicin baahida loo qabo degdegga, markaa si tartiib ah u qaadoiyo degenaansho. Tani waxay kuu saamaxeysaa inaad dib-u-hagaajiso si deg deg ah haddii ay jiraan xaalado aan loo baahnayntaasoo tilmaamaysa in dhamaadka, isbeddelka u dhexeeya istaraatiijiyada qorsheysan iyo istaraatejiyadda fulintawaxay noqon doontaa mid cidhiidhi ah oo la kontroolo
La soco Qorshahaaga
Ganacsi guulaysan ma socdokormeer iyo xakameyn. Taasi waa khadadka ilaalinta iyo xaqiijinta tayada. Nuxurkakormeerku waa inay qaadaan tallaabooyin sax ah sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah sababtoo ah fogaanta fog waxay ka timaaddaaQorshaha, way ka sii adag tahay inuu noqdo maaraynta, iyo qaaliga qaaliga ah ee ganacsigu helo. Backlogmaareynta waxay ku lug leedahay heer aad u sarreeya; Su'aashu waxay tahay: danta la siin doonomuhiimadda kale? Iyo wixii xiga ee maskaxda ku yimaada waa iskahorimaad
Qaado Talaabooyinka Dajinta
Baahida loo qabo in la sugo sawirka iyo sumcaddaee ganacsiga iyo waliba waxyaabo kale sida qiimaha, qanacsanaanta, iyo waxtarka ugu sareeya ee khayraadkaficilada saxitaanka ee loo baahan yahay. Oggolaanshaha dib-u-habeynta, dib u dhiska iyo dayactirrada dib-u-hagaajinta waa inay noqdaanoo lagu sameeyey waqti xadidan oo cayiman oo aan saameyn ku yeelan doonin dhammaan muddada ganacsiga.
Dadka Ogow Ganacsigaaga
U adeegso warbaahinta bulshada, erayga afkaiyo hab kasta oo xayaysiis xayeysiin ah si kor loogu qaado ganacsigaaga. Tani waxay kor u qaadi doontaa iibinta iyo kordhinta dakhliga halkaKharashka ayaa si tartiib tartiib ah u dhici doona waxaana faa'iido u noqon doonaa mustaqbalka fog
Ha joojin kormeerka
Ugu dambayn, ha joojin kormeerka sababtoo ahdunida ganacsigu waa mid aad u firfircoon oo isbeddel ah lama huraan. Noqo mid firfircoon, sii wad waxbarashada, kuna hayisticmaalka aqoon iyo xirfad Source . Koboca iyo ballaarinta ayaa si dabiici ah u iman doona, fikradda isbeddelku wuxuu kaa ilaalin doonaa inaad marayso